Kabarin-dRamatoa Voahangy Rajaonarimampianina, Fetin’ny reny 2017 | Présidence de la République de Madagascar Kabarin-dRamatoa Voahangy Rajaonarimampianina, Fetin’ny reny 2017 – Présidence de la République de Madagascar
Accueil » Première dame » Kabarin-dRamatoa Voahangy Rajaonarimampianina, Fetin’ny reny 2017
Billet publié dans Première dame le 28 mai 2017 par webmaster
Ry Reny Malagasy rehetra manerana ny nosy,
Tahaka ny firenena maro eran-tany dia mankalaza ny Fetin’ny Reny isika eto Madagasikara anio,
Ny voalohan-teniko dia ny fiarahabana antsika Reny malagasy isan-tokantrano rehetra, nahatratra ity Fetin’ny Reny ity indray.
Sarasara tsy ambaka Tompokovavy isany!
Isika izay Mpanjakavavin’ny tokantranontsika avy, any amin’izay misy antsika rehetra any, na any ambanivolo izany na an-drenivohitra.
Mirary fety sambatra sy feno fifaliana ho an’ny Reny rehetra ka ho tojo ny soa izay tadiavina, ho sendra ny tsara izay katsahina, ho mangidy lavitry ny rofy sy ny aretina, ho lava velona ary hiadam-pinaritra.
Loharano nipoiran’ny firenena isika Reny, koa dia rariny loatra raha toa ka anokanana fotoana sy andro toy izao, hampahatsiahivana ny andraikitra makadiry sy ny anjara-toerana lehibe sahanintsika anivon’ny ankohonanantsika sy ny fiaraha-monina, eo amin’ny fitantanana ara-pitaizana, ara-ekonomika sy ara-moraly ny tokantranontsika.
Fa inona tokoa moa izany hoe atao hoe Reny?
Samy manana ny filazany fa indreto santionany vitsivitsy:
• Ny Reny dia ilay olona niteraka sy nanabe antsika, ilay be fitiavana sy feno fanoloran-tena, mpiahy sy mpikarakara, mpikolokolo sy nitaiza ary antoky ny fampitana ny soatoavina, ilay modely : hoy mantsy ny ohabolana vahiny iray hoe « vao minono ny zaza dia efa mahazo fanabeazana… »
• I Neny dia ilay anarana izay avy hatrany dia tonga eo ambavantsika rehetra raha vao misy zavatra mahazo antsika,
• Ny fitiavan’i Neny dia tsy hay vinavinaina na refesina akory ary tsy vidiana fa azon’ny tsirairay maimaim-poana;
• I Neny sy ny fitiavany dia tahaka ny rivotra iainana sy fohantsika ka heverina fa mandeha ho azy ny fisiany ; fa rehefa tsy eo intsony kosa izy, vao tsapa sy tsaroana ny hamafin’ny fahabangany
Ry Reny rehetra eto amin’ny Nosy,
Tompokovavy hajaina isany,
Raha ny antontan’isa vokarin’ny Firenena Mikambana no vakiana dia isika Reny no tena mibaby fahasahiranana ao anatin’ny fiarah-monina : misy mitaiza irery ny zanany, satria nilaozan’ny vadiny, na maty vady na lasa nitady asa any an-tany hafa ralehilahy
Ny androatokon’ireo olona tsy mahay taratasy eran-tany dia vehivavy.
Nefa tsy maintsy manaraka ny toetrandro sy ny fandrosoana isika ka ho sarotra ny fifandraisana sy ny fifampiresahana amin’ireo zanantsika.
Etsy andaniny koa anefa, noho ny fihasarotan’ny fiainana ankehitriny sy ny fahalafosany, dia tsy maintsy miandahy miambavy isika Reny.
Fa sady mibaby ny fanabeazana, ny fampianarana, ny fitaizana sy ny fikolokoloana, ary indrindra ny fanomanana ny zanatsika hiady amin’ny hetraketraky ny fiainana isan-karazany.
Mila Reny miatrika izany fihazakazaky ny toe-piainana izany isika : Reny haharaka ny toetrandro afaka manohana antsakany sy andavany ny vadiny, ny zanany, ny ankohonany, ary mandray anjara feno amin’ny ezaka fampandrosoana eo anivon’ny fiaraha-monina, ka hitondra ny anjara-birikiny amin’ny fanarenam-pirenena.
Tsotra sy mazava mantsy ny kajy : Ny fandresentsika Reny izay antsasa-manilan’ny mponina no fandresen’ny firenena.
Ahoana no hahatrarana izany tanjona izany ?
Mazava ho azy fa tsy vita mora izany ary tsy vita samirery. Mila fanabeazana mifanentana amin’ny zava-misy isika ary mila fiarahana mientana koa.
Eo ireo fandaharan’asa sosialy ataon’ny fanjakana izay miady amin’ny fahantrana, ny fiarovana ny Reny sy ny Zaza ary ny ankizy sy ny tanora.
• Eo koa ny fananganana ny Ivo-toerana CARMMA izay efa am-polony maro no mielim-patrana eran’ny nosy.
• Nohatevenina koa ny ady amin’ny SIDA, ny fanaovana vaksiny ny reny sy ny zaza, ny fitsaboana sy ny fandidiana ireo reny tratry ny aretina faharovitan’ny tatavia, ary ny fanohanana ny fianakavian’izy ireo, mandritra ny fotoana fitsaboana .
• Ary vao tsy ela akory izay dia tafapetraka ny fanovana ilay Fehezan-dalana momba ny Zom-pirenena : Araka ity fanovan-dalàna ity, ny fampitan’ny reny ny zom-pirenena amin’ny zanany dia mitovy amin’ny an’ny ray, na ahoana na ahoana ny toe-panambadian’ny reny, na inona na inona satan’ny zaza, na zaza nekena ara-panjakana, na ivelan’ny fanambadiana: araka ny andininy faha-9 amin’ny lalàna laharana 2016-038 tamin’ny 15 desambra 2016.
Fandresena lehibe izany ho antsika Reny malagasy.
Eto dia mahatsiaro manokana koa ireo vehivavy tantsaha ny tenako, ary manao antso avo mba hampitomboana sy hitohizan’ny ezaka efa natomboka hanatsarana ny fiainan’izy ireo.
Mbola tafiditra amin’ny ezaka hanatsarana ny fiainan’ny vehivavy eto Madagasikara koa ny fanatevenana ny tambazotran’ny fahalalana amin’ny alalan’ny fananganana ireny ivo toerana fampiofanana amin’ny asa sy teknika ho an’ny vehivavy ireny ary ny fametrahana trano famakiam-boky, nanomboka roa taona lasa izao.
Eto ampamaranana dia mahatsiaro manokana ihany koa ireo kamboty nilaozan’ny reniny ny tenako, ka hiezaka isika hampitombo ny vinanasa izay efa natao hanampiana sy hahatafita azy ireny amin’ny fiainana.
Ry reny manerana ny Nosy, mirary soa sy fahombiazana ho antsika rehetra kitro ifaharana sy ala hikirizana, valabe fihotazana ary famoloana hanahazana, fototra iorenan’ny trano sy faka anirian’ny hazo.
Misaotra tompokovavy ary dia mbola manantitra ny firarian-tsoa.
← Mercredi 24 Mai 2017 à 16 Heures au Palais d’Etat d’IAVOLOHA
Le Président de la République en Allemagne Fédérale : L’agriculture, l’énergie et l’environnement en priorité →